नेपालमा बेलायती लगानी भित्र्याउन जोड | We Nepali
नेपालमा बेलायती लगानी भित्र्याउन जोड
२०७३ मंसिर २५ गते १:२४
लन्डन । नेपालमा नयां संविधान जारीपछि वातावरण सुदृढ रहेको जनाउंदै बेलायती लगानी भित्र्याउन जोड दिइएको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा शुक्रबार सांझ व्यापार र लगानी विषयमा केन्द्रित एक सेमिनारका सहभागीले लगानीका लागि नेपाल उचित गन्तव्य रहेको ठहर गर्दै बेलायती लगानी अझै बढाउनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (बीएनसीसी) ले सेमिनार आयोजना गरेको हो ।
व्यापार तथा लगानीको क्षेत्रमा बेलायत र नेपालबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम गरिएको हो ।
सेमिनारमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले बेलायत र नेपालबीच व्यापार र लगानी बढाउन बीएनसीसीले गरेका पहलहरुको प्रशंसा गरे । उनले बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवसाय सञ्चालनको अनुभव लिएका नेपाली व्यवसायीहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नेतर्फ पहल गर्न सुझाव दिए । नेपालमा बेलायती लगानी बढाउने प्रयासमा बीएनसीसीसंग मिलेर सहकार्य गर्न दूतावास इच्छुक रहेको जनाउंदै उनले त्यसका लागि आफ्नो प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरे ।
बेलायती हाउस अफ लर्डसका स्थायी सदस्य अर्ल अफ स्याण्डवीचले बेलायत र नेपालबीचको व्यापार सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि यहांको संसदबाट हुन सक्ने पहलका लागि आश्वासन दिए ।
उक्त सेमिनारमा ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन कंडेलले नेपालमा व्यापार र लगानीका लागि वातावरण उचित रहेको बताए । नेपालमा केही बेलायती कम्पनीहरुले उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै कंडेलले बेलायतबाट नेपाल भित्रिने लगानी अझै वृद्धि गर्न बीएनसीसी प्रयत्नरत रहेको बताए । ‘कैयन चुनौतिमाझ पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छन्’, अध्यक्ष कंडेलले भने, ‘दोहोरो कर लगायतका केही कुटनीतिक व्यवधान कायम छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून भएर प्रतिस्पर्धाको जोखिम धेरै कम छ ।’
अ सुट दयाट फिट्स नामक कम्पनीका सिइओ डेभिड हाथिरामनीले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दाका आफ्ना अनुभव सुनाए । विश्वका अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालीहरु कामप्रति बढि बफादार, जिम्मेवार र समस्या समाधानका लागि बढि सामथ्र्यवान रहेको भन्दै उनले नेपाल लगानीका लागि उत्तम गन्तव्य रहेको धारणा राखे । हाईड्रो पावर व्यवसायी विनय भण्डारीले नेपालमा हाईड्रोको क्षेत्रमा लगानीका लागि विद्यमान सम्भाव्यता र चुनौतिहरुबारे एक प्रिजेन्टेसन दिए ।
गेटवे एसिया एण्ड इन्टरप्राइज वेल्नेसका एस बर्मा र लालजी भेकरियाले बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णयपछिको सन्दर्भमा बेलायतबाट नेपालमा हुन सक्ने लगानीका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख कार्यकारी रिचार्ड पेलीले गरेका थिए भने उपाध्यक्ष महन्त श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य दिए । सेमिनारमा बेलायती विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधीसहित लण्डनका विभिन्न बरोका मेयर, बेलायती तथा नेपाली व्यवसायीहरुले भाग लिए ।
यसैबीच, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई संस्थाको संरक्षक नियुक्त गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा राजदूत सुवेदीलाई संरक्षकको रुपमा औपचारिक स्वागत गरिएको हो । बीएनसीसी अध्यक्ष राजन कंडेलले सुवेदीलाई संस्थाको संरक्षक नियुक्त भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । लामो समयको रिक्ततापछि बेलायतमा नेपाली राजदूतको रुपमा सुवेदी नियुक्त भएकाले उनीबाट आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा समेत आफूहरुले उल्लेखनीय योगदानको आशा राखेको कंडेलले बताए ।